Banky iraisam-pirenena – Vondrona afrikanina: hividy vaksiny 400 tapitrisa iarovana amin’ny Covid-19 | NewsMada
Banky iraisam-pirenena – Vondrona afrikanina: hividy vaksiny 400 tapitrisa iarovana amin’ny Covid-19
Nivory tany Washington, omaly, ny minisitra afrikanina momba ny fitantanam-bola sy ny Vondron’ny banky iraisam-pirenena ahafahana manafaingana ny fahazoan’i Afrika vaksiny mialoha ny fiavian’ny valanaretina Coronavirus andiany fahatelo, araka ny fanambarana. Hiara-kiasa ny Banky iraisam-pirenena sy ny Vondrona afrikanina hanohana ny hetsika manokana ahafahan’ny firenena tsirairay mividy vaksiny ho an’ny olona 400 tapitrisa aty Afrika.
Tanjona ny hahavita vaksiny ny 60%-n’ny vahoaka afrikanina hatramin’ny taona 2022. Hanampy ny fandaharanasa Covax efa mihatra amin’izao fotoana izao ny fiaraha-miasa vaovao eo amin’ny roa tonta ka ampiasaina hividianana vaksiny ny sora-bola avy amin’ny banky iraisam-pirenena. Vonona ny Banky iraisam-pirenena hanohana ny Vondrona afrikanina hividy ireo vaksiny haparitaka any Afrika ireo, hoy ny filohan’ny Vondrona, i David Malpass.
Mbola hanampy amin’ny fanaparitahana ireo vaksiny ireo koa izy ireo. Rehefa tonga ny vaksiny, 30% amin’ny mponina aty Afrika izay mahatratra 1, 3miliara no hisitraka izany. 12 miliara dolara ny vola hatokan’ny Banky iraisam-pirenena hividianana vaksiny. Firenena 50 no hiompanan’ny fanampiana hatramin’ny faran’ny volana ka aty Afrika ny roa ampahatelony.